Ukuthenga iiKlabhu ezitsha zeGolf (Izinto zokucinga ngazo)
Ngaba ulungele ukufaka iifolthi zakho zegalufa elidala kunye nezitsha? Nazi izinto ezimbalwa zokugcina engqondweni ngaphambi kokuba uthenge isethi entsha yeeklabhu zegalufu.
Ukuchonga izidingo zakho
Uphantse uchithe amakhulu - mhlawumbi amawaka, kuxhomekeke kwibhanki yakho yebhanki kunye nezinga lakho lokuzibophezela - iidola. Into ebaluleke kakhulu xa ushintshe iqoqo elidala lemigodi yegalufu kunye nesethi entsha kukunyaniseka malunga nomdlalo womdlalo wakho, nokuzinikezela kwakho kumdlalo.
Ingakanani imali kunye naluphi uhlobo lwezixhobo ozivelayo lilungele umdlalo wakho kunye nokuzinikezela kwakho?
Cinga iinguqu kwiMidlalo Yakho
Zibuze lo mbuzo: Ngaba ndiyayifuna iqela leehlobo ezahlukeneyo ngenxa yeenguqu kumdlalo wam? Umzekelo, ukuba inkcazo yakho yokukhubazeka ikhulile ngenxa yokuba ungadlala ngokuphindaphindiweyo, ungase ufune ukutshintsha loo maqabunga emisiphayo kunye neentambo , okanye ezo zindebe ezide kunye nama-hybrids. Ngokwahlukileyo, ukuba uye wabonisa ukuphucula okukhulu, mhlawumbi uzimisele ukujonga ukuhamba kwiklasi ukuya kwiiklabhu ezenzelwe abadlali abangcono. (Ulawulo olubanzi lwesithupha: Thatha inzuzo yeteknoloji yokuphucula umdlalo - ngakumbi, bhetele.) Ukulinganisa ngokuqinisekileyo izinga lakho lobuchule nokuzinikezela kunye nokudlala kweeklabhu ezintsha kunokukunceda kuphela.
Ngaba Ufanele Utshintshe Amashishini?
Umdala esiyifumanayo, kusenokwenzeka ukuba sisidinga i-flexibility flex on our shafts . Uninzi lwamaziko okufundisa luya kukuxelela ukuba ininzi amadoda idlala imivalo enzima kakhulu kwimidlalo yazo ukuqala.
Ninyanisekile ngokuguqa kwakho. Ngaba ufanele udlale i-strap flex? Ngokufanayo, abadlali abanamaqondo athathaka okanye abuthathakayo ngokubanzi bazuza kwiimpawu zegraphite . Ukuba udlala insimbi kodwa ukuguqula kwakho kuye kwancipha, kunika i grafite ingqalelo.
Ukukhetha i-Right Shaft Flex
Indlela yokukhetha iShaft entsha
Indlela ekhuselekileyo yokuphendula umbuzo malunga neengqungquthela kukufumana i-clubfitting. I-clubfitting ehamba ngamatyala - ukuthatha imilinganiselo embalwa, ukuphendula imibuzo embalwa malunga nemida-enokuthi yenziwe kuyo nayiphina ivenkile kunye ne-intanethi. Kodwa i-clubfitting ejulile ehleliyo imizuzu engama-30-45 kunye neprogram yokufundisa okanye i-clubfitter yezobugcisa yindlela efanelekileyo yokuqinisekisa ukuba izixhobo oza kuzithenga zifanisa ukuzula kwakho kunye nomzimba wakho.
I-Clubfitting iyakusiza iiClubs zakho kukunceda
Ngaphambi kokuba Uthenge i-Clubfitting
Beka uhlahlo lwabiwo-mali
Emva kokuba ufumene imeko yangoku yomdlalo wakho kunye neenjongo zakho zexesha elizayo, lixesha lokuqwalasela ukuba uzimisele kangakanani ukuchitha. Abanye abagadi begalufu banamabhajethi angenamkhawulo, kwaye akukho nto ephosakeleyo nge-overspending ukuba ulolu hlobo. Kodwa ezininzi zegalufa zineenkcitho ezithile zebhajethi. Iindaba ezilungileyo kukuba "ixabiso" okanye "uhlahlo lwabiwo-mali" lwezinto zokusebenza zegalufu liyaqhubeka nokunika ukhetho olungcono nangakumbi kunyaka ngamnye. Qinisekisa ukuba uzimisele kangakanani ukuchitha, kwaye unamathela kuyo.
Ixabiso loPhando kwi-Pro Shop
Funda iziKhupha zeGalati
Izihlandlo ngamanye amaxesha zinokudideka njengoko zinokuba luncedo, kunikezelwa ukuba "iingcali" ezahlukeneyo zinikezela ngezigqibo ezahlukeneyo malunga nemveliso efanayo. Kodwa ukuhlaziywa kokufunda kunokukunceda ukuba ufumane ingqiqo yezinto ezikhoyo ngaphandle kwexabiso lexabiso lakho kwaye lifana nomdlalo wakho.
Iingcombolo zingenakukunika impendulo epheleleyo, kodwa inokukunceda unciphise intsimi. Unokufumana ukuhlaziywa kwi-intanethi nakwiimagazini zamagofu.
Ukuphononongwa kwezixhobo zeGalufa kunye neendaba
Enye into enokunceda ukunciphisa intsimi yimibono yabahlobo, yeprogram yegalufa yasekhaya kunye nabathengisi kwiivenkile zeprogram . Ukuba uthengisa uhlahlo lwabiwo-mali, kwisebe yesebe umzekelo, mhlawumbi awunakufumana uncedo oluninzi kubasebenzi besitolo. Kodwa kukho izitolo ezincinci malunga needolophu zonke eziye zavelisa iimpendulo zokunyaniseka nokunceda. Fumana enye yezo kwaye unokufumana iiklabhu ezingcono kuwe.
Ngokuqinisekileyo, konke kuya kwezinto ozithandayo, oko ufunayo kunye nokuba ungaphila. Ekugqibeleni, umntu oyedwa ofuna ukukholiswa nguwe. Yichitha ixesha elijongeyo kwaye uthelekisa amaxabiso.
Inventory kunye namaxabiso ayahluka kwivenkile ukugcina. Gcina kwi-bhajethi yakho kwaye ufumane isethi yamachule enokuzithemba ngokufanisana nobuchule bakho kunye neenjongo
I-Top-Flite XL 3000 Ukuhlaziywa kweBhola yeGrafti eyiGreyiti ephezulu
Ukuphakama kwe-Ski Size
I-TaylorMade iCalea yaBafazi bamaGlabhu kwiGolf
Ngaba i-TaylorMade R580 Driver Right For You?
Indlela yokufumana ixabiso eliphantsi, kodwa umgangatho, izambatho ze-Ski
Ukusekwa kweMassachusetts Bay Colony
I-Top 5 Abalawuli bamaRoma abakhulu kakhulu
Ulwazi lwe-Lanthanum - La Element
I-Acrylic Paint Ukomisa ixesha (ngeBrith)
Izikolo ezilungileyo zeSouth America
Iingcamango malunga nokuSahlukana kweCawa noRhulumente
Lithini IBhayibhile Ngokuzalwa Okutsha?
Indlela yokukhusela kunye nokuLawula iSifo esiTywayo
Uvavanyo lokuQinisekisa ukuQala
Ulungelelaniso lweCommentination Definition